Worm & Bevel Gear အော်ပရေတာ QDX3-S စီးရီး - လျော့ချရေး၊ တီကောင်လျှော့ချသူများ၊ တီကောင်ဂီယာအုံများ၊ ဂြိုလ်ဂီယာအုံများ၊ အမြန်နှုန်းလျှော့ချစက်များ၊ အမျိုးအစားများ၊ helical ဂီယာ၊
Speed ​​Reducer & Gearbox
အနိမ့်တန်ပြန်ညာဘက်ထောင့် servo တီကောင် gheadheads
လိမ် bevel ရည်ရွယ်မော်တာ
tracors & အော်တိုဘို့ဂီယာအုံ
အထူးလျှော့ & ဂီယာအိတ်များ
Worm & Bevel Gear အော်ပရေတာ
Gears အစိတ်အပိုင်းများနှင့် PTO Shaft & Others
spline ရိုးတံ & ဂီယာရိုးတံ
ဂီယာ & helical ဂီယာစွယ်
တီကောင်ဂီယာ & worm
Bevel ဂီယာ & sprial bevel ဂီယာ
ရေနံ pumps များအတွက်ဂီယာ
လျှပ်စစ် Drive & ဟိုက်ဒရောလစ် Drive ကို
ဟိုက်ဒရောလစ် drive ကိုစနစ်
YD စီးရီး Multi- မြန်နှုန်းမော်တာ
YC YL စီးရီးမော်တာများ
Brushles DC မော်တာ
ရှားပါးဒြပ်စင် - အမြဲတမ်း - သံလိုက်မော်တာများ (REPM MOTORS)
Worm & Bevel Gear အော်ပရေတာ QDX3-S စီးရီး
ပင်မစာမျက်နှာ / Speed ​​Reducer & Gearbox / Worm & Bevel Gear အော်ပရေတာ QDX3-S စီးရီး
အမျိုးအစား: Speed ​​Reducer & Gearbox
Valve operator - Worm & Bevel Gear အော်ပရေတာ
ဘောလုံးအဆို့ရှင် brtterfly အဆို့ရှင်နှင့်အဆို့ရှင်အတွက်သင့်တော်သည်။
ပုံစံ S6 S7 S8 S9 S10 S12 S13 S14 S15
အချိုးအစား 456: 1 551: 1 583: 1 682: 1 737: 1 1920: 1 2407: 1 2703: 1 2759: 1
input moment (nm) 122 133 156 156 156 195 195 195 250
ထွက်ခွာချိန် (Nm) 4000 5480 5850 7020 18500 28500 34500 39000 50000
ထောင့်လှည့် 90 ° 90 ° 90 ° 90 ° 90 ° 90 ° 90 ° 90 ° 90 °
သည်းခံနေခြင်း5°±5°±5°±5°±5°±5°±5°±5°±5°±
လိပ်ပြာအဆို့ရှင် DN 400-450 500-600 700 800 900-1000 1100-1200 1400-1600 1800-2000 2400
ဘောလုံးအဆို့ရှင် DN 200 250-300 350 400 500 600 800 1000 1200
မိုင် 8-M14 8-M16 8-M16 8-M20 12-M20 12-M20 12-M22 12-M27 12-M30
dmin-max 38-48 50-60 55-70 75-85 90-100 98-120 115-145 160-180 200-250
သော့ချက်×အရေအတွက်။ × 90 ° 14 ×216 ×220 ×222 ×228 ×228 ×232 ×232 ×236 × 2
ပုံစံ S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 45 58 90 116 195 300 600 1000 2000
(၁) ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းများကိုဖောက်သည်များအားတင်ပြသည်။
(၂) ကျွန်ုပ်တို့သည်အရှေ့တောင်အာရှ၊ အာဖရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိကရှိအဓိကဖောက်သည်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။
(၃) ဒေသအသီးသီးမှ ၀ ယ်သူများ၏လိုအပ်ချက်အရသင့်အတွက်စျေးဝယ်ရာတွင်အပြိုင်အဆိုင်များပြားစေရန်အတွက်သင့်အတွက်လျှော့ချသည့်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်လိုက်ဖက်ပါသည်။
(၄) ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးဖောက်သည်များအားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
(၅) ကုန်ပစ္စည်းများကိုတရုတ်နိုင်ငံရှိမည်သည့်ဆိပ်ကမ်းမှမဆိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တင်ပို့နိုင်သည်။ သင်မေးမြန်းစုံစမ်းရန်ကြိုဆိုပါသည်။
၂။ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစစ်ဆေးခြင်းစည်းမျဉ်းများ - ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်မပေးပို့မီ ၁၀၀% စစ်ဆေးမှုကိုကျော်ရမည်။
3. OEM / ODM ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ
4. ၂၄ နာရီအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု။
၅။ Real-time quotation query
HZPT တွင်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုအမြင့်ဆုံး ဦး စားပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများသည်အရည်အသွေးရှိသောနည်းလမ်းများနှင့်အခြေခံမူများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။
ဤသို့နက်ရှိုင်းသောကတိက ၀ တ်သည်ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်နှင့်ကမ္ဘာ့ ဦး စားပေးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
အထုပ် & ခဲအချိန်
အရွယ်အစား - ပုံဆွဲခြင်း
သစ်သားဖြစ်ရပ်မှန် / ကွန်တိန်နာနှင့် pallet, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ချက်များနှုန်းအတိုင်း။
15-25days နမူနာ။ 30-45days တရားဝင်အမိန့်
ဆိပ်ကမ်း - ရှန်ဟိုင်း၊
တရုတ်နိုင်ငံမှ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်အကျိုးရှိပါသလား။
တရုတ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများသည်တရုတ်သည်အပြိုင်အဆိုင်အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းများဖြင့်ကမ္ဘာကိုထောက်ပံ့နေသဖြင့်သင်ပစ်မှတ်ထားသောစျေးကွက်များတွင်အကျိုးရှိသည်။
၂။ ကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်သည်တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရန်လိုအပ်ပါသလား။
ငါတို့အဘို့အရာခပ်သိမ်းကိုဂရုစိုက်သောကြောင့်လေယာဉ်စီးခ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာစရိတ်သက်သာသည်။ သို့သျောလညျး, သငျသညျတရုတ်သွားရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင်ကအံ့သြဖွယ်တည်းခိုရန်စီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။
စက်မှု၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး။ ထုတ်ကုန်တိုင်းကိုအထူးပြုအဖွဲ့တစ်ခုသို့အပ်နှံသည်။
၄။ တရုတ်ကနေ ၀ ယ်တာ၊
သငျသညျအခြေခံအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမအန္တရာယ်များရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဝယ်ယူကြပြီးသင်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတူစိတ်ချစွာအနားယူနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်တရုတ်ကိုလာရန်အချိန်ရလျှင်၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့ထံသင်လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များနှင့်အရောင်းအဖွဲ့သို့သင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ငါတို့ကဲ့သို့သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ပါမည်။ အကယ်၍ သင်ဟာတရုတ်မှာဗဟုသုတရှိသောမိတ်ဖက်များလိုလိုခရီးမသွားလိုလျှင်ခရီးသွားစရာမလိုပါ။
၅။ ကျွန်ုပ်၏ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကိုကျွန်ုပ်ဘာသာရှာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုလိုအပ်သနည်း။
သင်အဲဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်။ သို့သော်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်များစွာမြင့်မားလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင့်အနေဖြင့်စျေးကွက်ကိုသိပြီးသင့်အားအခွင့်အလမ်းကွန်ယက်တစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်ဒေသခံလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး မရှိပါ။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုတရုတ်နိုင်ငံမှ ၀ ယ်လိုပါကအရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်စစ်ဆေးမှုကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီပြုလုပ်ရန်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်သင့်တွင်ရုံးခန်းရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကုန်ကြမ်းရင်းမြစ်များအကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ အရေးကြီးသည့်အချက်မှာအရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဌာနအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီများ၊ အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာအကူအညီများ၊ စစ်ဆေးရေးအကူအညီနှင့်ဥပဒေရေးရာအကူအညီများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။
၇။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးအတွက်သာလား။
မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကော်ပိုရေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးသားမှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နွေးထွေးသောယုံကြည်မှုရရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ကိုဂရုစိုက်ပြီးသင့်အားယခင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်ပြုလုပ်သည်။ အတူတကွခွန်အားမှခွန်အားသို့သွား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစားမှအကြီးစားသို့မည်သည့်ကော်ပိုရေးရှင်းကိုမဆိုကြိုဆိုပါတယ်၊ တိုးတက်ပါစေ။ ။ ။
E-Mail က: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ထုတ်လုပ်သူ: Air compressor၊ low backlash reducer၊ speed reducer, worm reducers, worm gearboxes, planetetary gearboxes, worm reducers, variator, helical gear, planetary gearbox, spiral bevel gear, စိုက်ပျိုးရေးဂီယာအုံတွေ၊ လယ်ထွန်စက်တွေ၊ ထရပ်ကားဂီယာ၊
Link: PTO ရိုးတံ Trcuk Driveline Drive ရိုးတံ
၃ မြန်နှုန်းလျှော့ချစက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သည့်အရေးကြီးသောအရာများ
ANSI စီးရီးများအတွက်စံဆက်သွယ်မှု link ကို
တိကျသော roller ကွင်းဆက်
တိကျစွာသံမဏိ roller ကွင်းဆက်
မူပိုင်ခွင့် ၂၀၀၈ All rights reserved ။ China-reducers.com